नवराज सिलवाल आस्थाकाे पक्षमा बाेल्दा सबै चकित ! के भने ? – Khabar Silo
काठमाडौं गायिका आस्था राउतसंग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनाभनको बिषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गायिका राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेसंगै बिभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भएका छन्।
चीनले नेपाललाई १५० मिलियन युआन बराबरको सैन्य सामग्री दिने सम्झौता
३ कात्तिक, काठमाडौं । चीन सरकारले नेपाललाई एक सय ५० युआन बराबरको सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र त्यहाँका रक्षामन्त्री वी फेङ्हबीच आइततबार नेपाली सेनालाई सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सहायता उपलब्ध गराउने प्रंतिबद्धता व्यक्त […]